ဘုရားသခင်၏ စကားကိုကြားရခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့် အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါသနည်း။
Daily Hope Tuesday March 8 2011
“ငါ့သိုးတို့သည် ငါ့စကားသံကိုနား ထောင်၍ ငါ့နောက်သို့ လိုက်ကြ၏။” (ယော ၁၀း၂၇)
လူအများတွေးမိတာက ဘုရားသခင်စကားနားထောင်ခြင်းသည် သိတ်အရေးမကြီးပါဟုထင်ကြသည်။ ဒါပေမဲ့ ထိုသဘော ထားသည် သင့်တယ်၊ ကျေနပ်ဖွယ်ဟုမမှတ်ယူပါနှင့်။ သင်သည်ဘုရားသခင်၏စကားကို အခြေခံစနစ်ဖြင့် နေ့စဉ်ကြားရန် လိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း၊? အကြောင်းပြချက် (၃)ချက်ရှိပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့် အသေအချာ အလွန်အ ရေးပါ၍ ဘုရားသခင်ထံမှ တိုက်ရိုက်ကြားနာရန် လိုအပ်ပါသနည်း။
၁။ သင်သည်ဘုရားသခင်၏ မိသားစုဝင်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြသည်။ သင်သည် ဘုရားသခင်၏အသံကိုဖမ်းယူ၍ ကြားရလျှင်၊ သင်၏ အဆက်အသွယ်ပြုခြင်းကိုအတည်ပြုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်က သူ၏သား သမီးများကိုစကား ပြောသည်။ ယော ၁၀း၂၇ က “ငါ့သိုးတို့သည် ငါ့စကားသံကိုနား ထောင်၍ ငါ့နောက်သို့ လိုက်ကြ၏။”
မိဘများက သားသမီးများကိုစကားပြောသလို၊ ဘုရားသခင်ကသူ၏သားသမီးများကိုစကားပြောသည်။ သူက သင်းအုပ်ဆရာ သို့မဟုတ် သာသနာပြုအဖွဲ့များကို သီးခြားမပြုပါ။ ခရစ်ယာန်ဖြစ်တာကြာသောသူများ။ ဘုရားသခင်က ယုံကြည်သူတိုင်းကိုစကားပြောသည်။ သူတို့ဟာ ရင့်ကျက်သောသူဖြစ်စေ (သို့မဟုတ်) မရင့်ကျက်သေးသော သူ ဖြစ်ပါစေ။
ခလေးများသည် မိဘများ၏ အသံများကို မှတ်မိသည်၊ ကျွန်တော်တို့လည်း ဘုရားသခင်၏အသံကို မှတ်မိရန်လိုသည်။ ကလေးငယ်များ မိဘများ၏အသံကိုချက်ခြင်း မသိကြပါ၊ သူတို့လေးတွေကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ သဘာဝအလျောက် မိဘများ၏အသံများကို မှတ်မိလာကြရသည်။ ဘယ်နေရာမှာ မဆိုကြားလာကြသည်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူတူဘဲ၊ ကျွန်တော်တို့၏ ၀ိညာဉ်ရေးရာ တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ဘုရားသခင်၏ အသံကြားရန် ပို၍လွယ်ကူလာသည်။
၂။ သင်၏အယူအဆ အမှားများမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ သင်ဘုရားသခင်၏စကားများကိုနားထောင်လျှင်၊ သင်သည်အမှား အနည်းငယ်သာလုပ်မိမည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်က ကြိုတင် သတိပေးနေ ခြင်းကိုကြားရသောကြောင့်။
သု ၃း၆ က “သွားလေရာ၌ ထာဝရ ဘုရား ကို မျက်မှောက်ပြုလော့။ သို့ပြုလျှင် သင်၏ လမ်းခရီးတို့ကို ပဲ့ပြင်တော်မူမည်။”
သတိပြုရန် ဤကျမ်းချက်သည် အသင်းတော်အတွင်းမှာဟုပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သင်ဘာဘဲလုပ်လုပ်နှင့် သင်ဘယ်ကို ဘဲ သွားသွား အကျုံးဝင်ပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ဘုရားသခင် ဘယ်နှစ်ကြိမ် ကယ်တင်ခဲ့သည်ကိုမရေတွက်နိုင်တော့ပါ၊ ဘုရားသခင်က အချိန်ဖြုန်းခြင်း၊ ပိုက်ဆံဖြုန်းခြင်းနှင့် ကာယဥာဏစွမ်းအားဖြုန်းခြင်းများမှ ကယ်တင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်သူ့စကားနားထောင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ အသက်တာတွင် အောင်မြင်မှုများထွက်ပေါ်လာစေသည်။ ဤအရာသည် ကမ္ဘာပေါ်မှာပြောနေသည့်အောင်မြင်မှု ကျိကျိတက်ချမ်းသာ၍ ထင်ပေါ်ကျောကြားခြင်းမျိုး မဟုတ်ပါ။ ဒီအရာသည် ဘုရားသခင်၏အောင်မြင်မှု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်--- အသက်တာ၌အဓိပ္ပါယ်ရှိရန် ဘုရားသခင်ပြုလုပ်ပေးသည့်အတိအကျဖြစ်တည်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆာ ၃၂း၈ “သင့်ကိုငါသွန်သင်မည်၊၊ သင်သွားရမည် လမ်းကိုပြတော်မူမည်၊၊ သင့်ကိုကြည့်ရှု့ ပြုစုမည်၊၊ ဥာဏ်ပညာမဲ့သော မြင်းလားကဲ့သို့ မဖြစ်နှင့်၊၊” (ဆာ ၃၂း၈) သင်၏အသက်တာရှိ အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းသည် အခြားတစ်စုံတစ်ယောက် အသက်တာ၏ အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းနှင့် လုံးဝခြားနားသည်ကို သင်သိပါသလား၊? သင်သည် အခြားသူ၏လမ်းကြောင်းကို ကျိုးစား၍လိုက်မိလျှင်၊ သင်၏အသက်တာတွင်၊ အခက်အခဲ ပြဿနာများ နှင့်တွေ့ရလိမ့်မည်။
ဘုရားသခင်က သင့်အတွက်လမ်းကြောင်းကိုစနစ်တကျပြုလုပ်ပေးထားသည်၊ ထိုလမ်းကြောင်းအတိုင်း သင်လျှောက် သွားပါက သင်သည်အောင်မြင်ရမည။်